Fanavahan-tSarangan’ny Sarimihetsika Meksikana: Fialamboly Sa Resa-Barotra Goavana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2016 5:11 GMT
Fonon'ilay sarimihetsika Meksikana fanta-daza .Sary : Juan Tadeo.
Ny sarimihetsika Meksikana izay mitrandraka ny fanavahan-tsaranga sy ny tsy fitoviana ara-tsosialy no anisan'ireo mahazo vola be indrindra any amin'ny boaty (efitra fijerena sarimihetsika). Ny fivoahan'ny ¿Qué culpa tiene el niño? ( “Nahoana no Omena Tsiny Ny Ankizy?”) no ohatra farany indrindra amin'ity trangan-javatra hitan'ny rehetra ity .
Araka ny efa notaterin'ny Global Voices teo aloha, namboly fifanenjanana ara-tsaranga tao Meksika ny elanelana ara-toekarena sy ny fahantrana, izay nitarika ny fielezan'ny fomba fijery fa mirehareha manoloana ny olonkafa ireo vondron'olona sy olona manankarena kokoa. Mampiharihary ny tsy fitoviana eo amin'ny firenena ny fisehosehoana hita maso sy ny fanjifana tafahoatra .
Tsy kitoatoa noho izany raha nahomby indrindra tany amin'ny boaty (efitra fijerena sarimihetsika) ilay sarimihetsika “The Noble Family” [Ilay Fianakavian'Andriana] rehefa navoaka tamin'ny 2013. Ny sarimihetsika dia miresaka tantaram-pianakaviana noforonina ho ao amin'ny saranga tampony ara-tsosialy sy ara-toekarena tao Meksika sy ny fahasarotana niainan'ilay fianakaviana noho izy ireo niezaka ny hiaina toy ny olontsotra tahaka ny olon-drehetra ao amin'ny firenena. Miavaka manokana amin'izany ny tsy maintsy nanaovan'ny mpianakavy asa kely karama. Ny iray nahita asa tao amin'ny banky, ny iray hafa nitondra fiara fitateram-bahoaka, ary ny fahatelo niasa ho toy ny mpampandroso sakafo, ary noterena hanao zipo fohy manara-batana izy tamin'ilay asa.
Tamin'ny May 2016, trano fijerena sarimihetsika teo ho eo amin'ny 1.100 tao Meksika no nijerena voalohany ilay “Nahoana No Omena Tsiny Ny ankizy?” notontosain'i Loza Gustavo. Araka ny gazety Milenio, nahasarika mpijery betsaka kokoa noho ny sarimihetsika The Angry Birds [Ireo Vorona Tezitra] tamin'ny faran'ny herinandro ilay sarimihetsika ary nihoatra ihany koa noho ilay famokarana andaniana an-tapitrisa dolara maro tao Hollywood antsoina hoe “Captain America: Civil War” [Kapiteny Amerika: Ady An-Trano]. Mitovy amin'ny fomba mahazatra hatramin'izay ny raiki-pohy handresena : Mikitika ny fanavahan-tsarangan'i Meksika. Milaza ny mpanao tsikera sarimihetsika Alejandro Alemán fa voafehy anatin'ny hatsikana tokana izany:
Voafehy ao anatin'ny hatsikana tokana ny fampihomehezana ao amin'ilay sarimihetsika: ny fahasamihafana ara-tsosialy teo amin'ny Maru sy Renato sy ny fifandonana ara-kolontsaina voapetraky ny fitambaran'ny fianakaviana roa tonta. Raha zanakavavin'ny manampahefana lehibe ao amin'ny governemanta mipetraka amin'ny trano-lapa i Maru (nilalao ny anjara toerany mahazatra i Jesús Ochoa), dia mipetraka amin'ny vondron-trano kosa i Renato sy ny reniny (nilalao ny anjara toerany tena mitovy amin'ilay lalaoviny ao amin'ny fahitalavitra i Mara Escalante). Raha manana asa mihaja ao Santa Fe i Maru, i Renato kosa tsy maintsy miasa toy ny zazalahy mpanatitra pizza. Raha misotro Champagne ny fianakavian'i Maru, misotro tepache kosa ny fianakavian'i Renato .
(Fanamarihana : Faritra iray ao amin'ny tanànan'i Mexico i Santa Fe izay lasa niha-nandroso be tao anatin'ny folo taona noho ny fananganana trano fiasana avo lehibe sy toeram-pivarotana tsara tarehy sy mihaja. Etsy andanin'izany, ny tepache dia zava-pisotro vita avy amin'ny mananasy niotrika, izay lasa tsy dia malaza intsony. Natokana ho an'ny olona manana fidiram-bola voafetra izy io raha ny marina.)
Ny fahalianana tafahoatra an'ny vahoaka Meksikana amin'ny tantaram-pitiavana eo amin'ny olona samy hafa sarangam-piarahamonina no nibahan-toerana tao amin'ny sarimihetsika nivoaka tamin'ny 2002 “Amarte duele” (” Maharary Ny Mitia Anao”) sy ny sarimihetsika Meksikana hafa tsy voatanisa, izay efa tamin'ny taona 1959 fara fahakeliny, hoy i Alemán nanamarika.
Nampitandrina ny mpijery ny fahamaroan'ny fanavahan-tsaranga (meksikana) be loatra ao amin'ny “Nahoana no Omena Tsiny ny Ankizy” ireo mpisera ao amin'ny media sosialy toa an'i Rufián:
Eny ary, lasa nahatsikaiky ny “Nahoana no Omena Tsiny Ny Ankizy” na dia teo aza ny tsy fifanavahan-tsaranga sy, raha velabelarina kokoa, ny fisian'ny fankahalana ny vehivavy.
Nandritra izany fotoana izany, nanamarika i Francisco Blas fa ny antony handehananay hijery sarimihetsika dia ny hiala voly:
¿aQue culpa tiene el niño?, quizá si sea un remake clasista pero divertida y cómica al final a eso vamos al cine no?, a divertirnos.
Nahoana No Omena Tsiny Ny Ankizy? Angamba mety filaza vaovao amin'ny fanavahan-tsaranga ilay izy nefa mampiala voly sy mampihomehy, ary izany no mahatonga anay handeha hijery sarimihetsika, sa tsy izany? Mba hifalifaly.
Tsara ny manamarika fa kely ny fankasitrahana azon'ny orinasan-tsarimihetsika malaza Meksikana avy any ivelan'ny firenena, avy amin'izany dia sarimihetsika tsara karazana vitsy ihany no mivoaka any ivelany. Azo isaina amin'ny ilan'ny rantsantanana ny horonantsary Meksikana misongadina. Angamba ny anisan'ny lehibe amin'izany ny “Amores Perros” (2000), nontotosain'ny mpamokatra nahazo loka ary fantatra eo amin'ny sehatra iraisampirenena Alejandro González Iñárritu. .
Ary koa, tsy tokony hohadinoina ny asan'i Luis Estrada, miaraka amin'ny fanakianana ara-potoana indrindra ny kolikoly sy ny herin ‘ny saranga politika tao amin'ny “Lalànan'i Heroda” (1999) sy “Ny Fitondrana Jadona Tonga Lafatra” (2014), ankoatra ny hafa. Kanefa izay no resahiny. Ny tantaram-pitiavana mahatsikaiky no mibahan-toerana amin'ny ampahany lehibe amin'ny sarimihetsika Meksikana ara-barotra izay voaravaky ny fahasamihafan-tsaranga mamaka lalina ary nampiavaka (ary toa miantso) ny ampahany betsaka amin”ny fiaraha-monina Meksikana.
Manisy hanitra hatrany ny tsikera ny fanarabiana ny fitondrantena mahasosotra izay tokony ho ezahanay horesena. Ampiasaina ho toy ny famandriham-barotra izay mitondra ny olona ho any amin'ny sarimihetsika sy mahatonga azy ireo hihomehy mandritra ny fotoana kely ny resaka fanavahan-tsaranga ao Meksika. Na izany aza, tsy ho ela, araka ny tatitra nataon'ny Global Voices teo aloha dia tsy maintsy hovahana amin'ny fomba matotra io fanavahan-tsaranga io ka tsy ho hatao ho olana tsy mampihomehy ny rehetra fa ho anton'ny fizaran-tantara mampangoraka noho ny fanavakavahana, fanamparam-pahefana, ary ny herisetra mihatra amin'ny mpiasam-panjakana tanatin'ny volana vitsivitsy farany.